संशोधनवाद, संसद्वाद र आत्मसमर्पणवादले दुनियाँमा कहि पनि समाजवाद ल्याएकाे छैन - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
संशोधनवाद, संसद्वाद र आत्मसमर्पणवादले दुनियाँमा कहि पनि समाजवाद ल्याएकाे छैन
विप्लव, महासचिव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी
२२ पुस २०७४, शनिबार ११:१८ January 6, 2018 Nonstop Khabar
तपाईंहरूले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, मालेमामा विकास र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाबारे, तपाईंहरूको कार्यक्रमबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र आलोचनासमेत भइरहेको छ नि ? कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ यी विषय ?
यसप्रति आलोचना हुने कुरा स्वभाविक हो । माक्र्सवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा त पुँजीवादी र संशोधनवादीहरूबाट आलोचना छ भने हाम्रो नयाँ संश्लेषणमा आलोचना हुने कुरालाई अनौठो मान्ने कुरा केही छैन । विज्ञानको नियम नै यस्तो छ हजारौँ आलोचनाहरू झेलेर मात्र खरो उत्रिन्छ । तर यसको गहिराइ, व्यापकता र गाम्भीर्यलाई नबुझेर पूर्वाग्रह, सङ्कीर्णता, रूढिवाद, ईष्र्या, कुण्ठा, छाडा एवम् आवारा तरिकाले गर्ने आलोचनाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । त्यता आलोचनालाई क्रान्तिको धारमा रेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सही विचार क्रान्तिको महायात्राबाट साबित हुन्छ । हाम्रो ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ वैज्ञानिक छ र यो साबित भइछाड्नेछ ।
एकीकृत जनक्रान्तिसञ्चालन गर्दा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र मित्र शक्तिहरूलाई कसरी सहकार्यमा राख्नुहुन्छ ?
विषय ठिकै भन्नुभयो तर उत्तरकोरियासँग अमेरिका गलिसक्यो पनि नभनौँ । कुरा के सत्य हो भने प्रतिरोध, स्वाधीनता र प्रगतिसहितको आत्मरक्षा भन्ने दृष्टिकोण नै पुँजीवादसँगको प्रतिस्पर्धामा वैज्ञानिक र वस्तुवादी दृष्टिकोण हो । उत्तरकोरिया यसैको नमुना हो । जहाँ प्रतिरोध र स्वाभिमान छ त्यहाँ मात्र रक्षा र उन्नति सम्भव छ । जहाँ आत्मसमर्पण र दलालीगिरी हुन्छ त्यसको पतन र विनाश अनिवार्य छ । उत्तरकोरियाले पुँजीवादलाई परास्त गर्दैनथ्यो र वैज्ञानिक समाजवादी मार्ग पकड्दैनथ्यो भने, कोरियाले अमेरिकाविरुद्ध प्रतिरोधको बाटो लिँदैनथ्यो भने उत्तरकोरियाको हालत पूर्वी जर्मनीकै जस्तो हुन्थ्यो । तर उत्तरकोरियाले सही बाटो लिएपछि अमेरिका पछि हट्न बाध्य भएको छ । अमेरिकाले निःसर्त वार्ताको प्रस्ताव गरेको कुरा हामीले पनि पायौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि वार्ता गर्ने भन्यो । यसभित्र अमेरिकाका अनेकौँ दाउ भए पनि उत्तरकोरिया र उत्तरकोरियाली जनताको एक तहको विजय हो । यसले उत्तरकोरियालाई मिच्न वा हमला गर्न सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश गएको छ । यसो त यो उत्तरकोरियाको मात्र विषय नभएर विश्व जनमतको अभिव्यक्ति पनि हो । स्रोत: रातो खबर साप्ताहिक,
नक्कली सर्टिफिकेटमा प्रन्या जोशी नाजवाफ, कसरी आईए र एसएलसीको सिम्बोल नम्बर एउटै भयो?
आफैले धारेहात लगाएर गाली गरेको व्यवस्थामा पार्टी चुर्लुम्म डुब्यो, एमालेमा विलिन हुँदै गरेको कसरी हेर्नु